Amanqaku kaDiogo Voz Martech Zone |
Amanqaku ngu UDiogo Voz
UDiogo ngummakishi wedijithali ozimeleyo othanda ukuthengisa ulwazi nabantu abakushishino. Ukuba awumfumani efunda malunga neendlela zentengiso zamva nje, uya kumfumana emamele iipodcast okanye esebenza kwiiprojekthi zoyilo.
Indlela iShmbiosis yoThengiso lweMveli neDijithali eTshintsha ngayo ukuba sizithenga njani izinto
NgeCawa, ngoFebruwari 28, 2021 NgeCawa, ngoFebruwari 28, 2021 UDiogo Voz
Umzi mveliso wentengiso unxibelelene ngokunzulu nokuziphatha kwabantu, iindlela, kunye nonxibelelwano oluthi lubonise ukulandela inguqu yedijithali esiye sayifumana kule minyaka ingamashumi amabini anesihlanu idlulileyo. Ukuzigcina sithatha inxaxheba, imibutho iluphendulile olu tshintsho ngokwenza iindlela zokunxibelelana zosasazo lwedijithali kunye noluntu lube yinto ebalulekileyo kwizicwangciso zabo zorhwebo, kodwa kubonakala ngathi amajelo emveli alahliwe. Iindlela zokuthengisa zesintu ezinje ngeebhodi zezibhengezo, amaphephandaba, iimagazini, itv, unomathotholo, okanye iiflaya ecaleni kwentengiso yedijithali nentlalo